Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamadda Jabhadda Waddaniga ah ee Ogadeniya oo jab wayn u geystay ciidanka cadawga Itoobiya
Ciidamadda Jabhadda Waddaniga ah ee Ogadeniya oo jab wayn u geystay ciidanka cadawga Itoobiya
Posted by maamule1	/ April 3, 2011
War deg deg ah oo maanta naga soo gaadhay gudaha Ogadeniya waxay sheegayaan in maanta oo bishu tahay 03/04/11 weerar ay Ciidamada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (CWXO) uu ku qaaday ciidamo Woyaane ah oo isku urursanayey Horo Hawd oo ka tirsan Jigjig in jab aad u weyn loogu gaystay ciidanka cadowga.
Waxana Halkaas looga furtay 9 AK 47 , 1 BKM iyo Satelite Telephone. Waxaa kale oo laga furtay dhar iyo kabayow badan oo saldhiga u yaalay. Ciidankii cadowga sidii loo eryayey waxay ku kala lumeem dhulkii miyiga ahaa baaqigoodii.
sidookale taariikhdu markay ahayd 01/04/11 meel lagu magacaabo Balalaha oo Daakhato ku taala, waxaa lagu dilay 30 askarta cadowga waxaana dhaawacoodii lagu daad gureeyey diyaaradaha qumaatiga u kaca. Warku wuxuu intaas ku darayaa in laga furtay qalab iyo saanad noocyo kala duwan ah oo badan.
Guulayssta Ciidanka Jwxo in Shaa Allaah
waa war lagu farxo wana guul aad uwayn waxana soodhawaday xoriyadiii ogadenia shacabkana waxaan leeyahay kaca oodagalamaay meel aad joogtanba cidabn wayanahihiina wajabay
guulaysta guulaysta cidanka jwxo
intay JWXO soo gali Jig-jiga jaahil ha u taliyo….
maashaa allaah waa guul guulle ayaan u mahadnaqaynaa, allaw noo siyaadi, N/hurayaasha CWXO guulaysta guullana ha idinla jiro waanu idiin ducaynhaynaa.
Allaah akbar Allaahu akbar.
Geesiyda aan quudhsiga qaadan ee jwxo.waxaan leenahay dhibka u madiinu ku jirto waxaa idinka saaran waajib ah in aad ka dhiidhidaaan,ogsoonaada in aan guusha lagu helin ciyaar ciyaar Allah (swt) waxaan leenhay Rabiyoow iyagaa kugu gar lehe gusha ha seejin.
21ka bisin ee ay qabsadaan marka ay wajahayaan ciidanka abbassiniyada mucatab ku dirika ah,geesinimada,wax iska caabinta dabiiciga ah ee rabi siiyay iwm.ayaa ah waxa guusha dhalinaya ee xisaabsan.
ilaahay ayaa awood leh waxaan aad oogu faraxsanahay guusha ay gaadheen (cjwxo) waa mid uu ku farxo ruux kasta oo damiir ku jiro ama muslim ah ilaahay umbaana laga heli karaa taas oo kale waxaana leeyahay ku sii wada garnaqsiga ilaa aay ka guuraan ogadenia guul iyo gobanimo
Godey gacalo says:
waa wax lagu farxo oo laga filaayay cjwxo. oo ah ciidan markasta utaagan difaaca dalka, dadka, diinta iyo duunyadaba waxaana hubaal ah in ay guulaysanayaan markasta oo waayo waxaa lajira oo garabkooda ah allah (swt). guulaysta guulaystayaal
walaal beenta aan xishoodka lahay ma iskadaysaan indinkana dan idiinma ah jabhadana dan uma ah sababto ah beentada hora runtaada danbe ayay udaran tahay
Waryaa ninkan wadani labaxayoow magaca haanaga kufsanin umaqalantide, beena waa waxa adiga afkaaga kasoobaxay
MAANSHA ALLAH ILAAHAY HAYDIN GUULEEYO RUNTII WAA WAX LAGU FARXO GUULAHA AY KU TALAABSANAYAA MUJAAHIDIINTA JWXO WAA IDIN GARAB TAAGANAHAY HIIL IYO HOOBA HOOSKIINAANU HADH SANAYNAA GUUL IYO GOBONIMO VIVA ONLF